यसकारण नि’यन्त्रण बाहिर जानसक्छ सुदूरपश्चिममा काेरोना – सडक मिडिया
यसकारण नि’यन्त्रण बाहिर जानसक्छ सुदूरपश्चिममा काेरोना
सडक मिडिया April 7, 2020 0
काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोभिड-१९ को स’ङ्क्रमण बढ्ने जो’खिम देखिएपछि तत्काल उच्चस्तरको नि’गरानी र ठूलो परिणाममा परीक्षण नगरिए स्थिति नि’यन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने जनस्वास्थ्य विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। केही दिनअघि त्यहाँ विदेशबाट आएका स’ङ्क्रमित व्यक्तिबाट उनको आफन्तमा पनि कोरोनाभाइरस सरेको पाइएको थियो। उक्त प्रदेशमा पर्ने नौवटा जिल्लामा सबै तहका गरी लगभग तीन हजार स्वास्थ्यकर्मी रहेको र त्यहाँ पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार र संरचना नभएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
यस्तोमा सङ्घीय सरकारले सक्रियतापूर्वक निगरानी र सम्भावित व्यक्तिहरूको परीक्षणमा ध्यान नदिए उक्त प्रदेशमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण ‘डढेलोको तहमा फैलन सक्ने’ सुदुरपश्चिमका स्वास्थ्य निर्देशकले जनाएको छ । चारजनामा सङ्क्रमण देखिएपछि सङ्घले कैलाली र कञ्चनपुरलाई लक्षित गरी करिब ३०० द्रुत परीक्षण कीटसहित चारजना प्रावधिक खटाएको र उनीहरू सोमवार साँझ त्यहाँ पुगेका छन्। इपिडिमिओलोजी तथा सरुवा रोग महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीले सावधानी नअपनाइए सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने जोखिम देखिएको बताएका छन् ।
उनले भने, “ब्रिटिशकालदेखि नै सुदूरपश्चिमका मानिसहरू भारतमा जाने गरेका छन्। मुम्बईदेखि कालापाहाडसम्म त्यहाँका मान्छे मजदुरी गर्छन् र ठूलो सङ्ख्यामा ती मानिसहरू भारतबाट नेपाल फर्किएका छन्। त्यस क्षेत्रमा पहाडतिर कतै कोरोनाभाइरसको परीक्षण नै गरिएको छैन र मेरो विचारमा त्यहाँ अन्यत्रभन्दा बढी जोखिम छ।” उनले गाउँगाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले ‘प्रहरीले निगरानी गरेको शैलीमा’ ज्वरो, रुघाखोकी र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिएका व्यक्ति खोज्नुपर्ने र व्यापकस्तरमा जाँच गर्नुपर्ने जनाए।
उनले भन्छन्, “सुदूरपश्चिमका अधिकांश ठाउँमा नाम मात्रैका अस्पताल छन्। धेरैजसो स्थानमा ठूला अस्पताल पनि छैनन् । त्यही भएर १०-१५ दिनका लागि त्यहाँका जिल्ला-जिल्लामा प्राविधिक टोलीहरू खटाउनुपर्छ र तीव्र गतिमा नमुना सङ्कलन गरी राजधानी वा धनगढीमा जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अहिलेको संयन्त्रले एकदमै सुस्त गतिले काम गरिरहेको छ। हाम्रो नेतृत्वले त्यति गम्भीरतापूर्वक नलिएको र मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न निकायले एकअर्कालाई हेरिरहेकाले सबैतिर अन्योल भएको देखिन्छ।”
भारतबाट आएका एक व्यक्तिका आफन्तमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सरेपछि दुई दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले द्रुत परीक्षण प्रणालीमार्फत्‌ कैलाली र कन्चनपुर जिल्लामा क्वारन्टीनमा रहेका सबैको परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि सोमवार चीनबाट ल्याइएका कीटसहित सङ्घका प्राविधिकहरू कैलालीका लागि प्रस्थान गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले प्रयोगशाला र परीक्षणको दायारा विस्तार गर्न आफूहरू लागिपरेको बताउँछन्। उनले भने, “हामीकहाँ भएको उपकरणले दिनको १० वटा मात्रै परीक्षण गर्न सक्ने रहेछ। त्यस्तै अर्को उपकरण त्रिपुरेश्वरबाट किनेर ल्याउन लागेका छौँ। काठमडौंबाट किटसहित आएका प्राविधिक जनशक्तिसँग थप छलफल गरेर हामी साँझै वा भोलिबाट थप परीक्षणहरू थाल्नेछौँ।”
कतिपय विज्ञले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट मान्यता नपाएका ती कीटबाट गरिने जाँचको गुणस्तरबारे प्रश्न उठाइरहँदा उनले दोस्रो चरणको सङ्क्रमण देखिएकाले राज्यको ‘सम्पूर्ण शक्ति’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
स्वास्थ्य निर्देशक अवस्थी भन्छन्, “आ’गोको झिल्का पनि सल्किसक्यो। ठूलो ड’ढेलो लाग्न नदिन नै हाम्रो शक्ति केन्द्रित हुनुपर्छ। कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भारतमा देखिएयता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कति मानिसहरू प्रवेश गरे भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन। त्यही भएर लक्षण देखिएका मानिसहरू खोज्न हामीले सबै प्रयासहरू अघि बढाइरहेका छौँ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २,३०० भन्दा बढी व्यक्ति क्वारन्टीनमा राखिएका छन् जसमध्ये कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा मात्रै लगभग छ सयजना क्वारन्टीनमा बसिरहेको अवस्था छ । फाल्गुन २३ गतेदेखि चैत ८ गतेसम्म वैधानिक रूपमा विभिन्न नाकाबाट ज्वरोको नाप गराएर आएका झण्डै एक लाख ४३ जनाभन्दा बढीको अभिलेख रहेको छ ।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी भन्छन्, “छलेर आउने, लुकीछिपी आउने, नदीमा पौडी खेलेर आउनेहरूको लगत हामीसँग छैन। तर पनि हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई भारतबाट फर्किएका सबैलाई क्वारन्टीनमा राख्नूस् भनेका छौँ।”
उनले भन्छन्, “हाम्रो प्रदेशमा त्यसरी जाँच गर्ने पर्याप्त सामग्री पनि छैनन्। भर्खरै जडान भएको उपकरणले पनि धेरै जाँच्न सक्दैन। हामीले सङ्घीय सरकारलाई थप सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर अनुरोध गरेका छौँ र कैलालीमा क्वारन्टीनमा रहेका सबै व्यक्तिको परीक्षण गर्ने निर्णय गरेकाले हामीलाई खुशी लागेको छ। हेरौँ कहिलेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ वटा अस्पताल र १६ वटा प्राथमिक उपचार केन्द्र रहेको छन्। अधिकांश प्राथमिक उपचार केन्द्रमा हाल चिकित्सक रहेका छैनन् । उक्त प्रदेशमा छ हजार जनाभन्दा बढी महिला स्वयंसेविका कार्यरत छन्।
शुक्रवार सरकारले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुन नदिने र निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरूले सरकारी अस्पतालमा काम गर्न चाहे सम्बन्धित पद मिलान गरी त्यसै अनुरूपको सुविधा दिइने बताएका थिए।
कति जनाले पढें ? 284
Previous Post: कक्षा ११ र १२ को परीक्षा स्थगित, कहिले हुन्छ अब ?
Next Post: कोरोना विरुद्ध ‘प्लाज्मा’ उपचार पद्धति सफल